Dutchtown စီးပွားရေးစွမ်းအားကော်မတီအစည်းအဝေး• DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
ဖြစ်ရပ် 9:6 pm တွင် @ မတ်လ 00
Dutchtown Economic Vitality Committee သည် Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များကိုအားပေးခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးကွဲပြားစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dutchtown သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ကြဉ်းရန်အတွက်လက်ရှိနှင့်အလားအလာရှိသောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ လူနေအိမ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပိုင်ရှင်များနှင့်အခြားပါတီများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ပါမည်။
အဆိုပါ Dutchtown ကော်မတီများ အကြားပူးတွဲအားထုတ်မှုကနေတဆင့်ထူထောင်ခဲ့ကြသည် Dutchtown မြို့လယ်, အ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်, ပြီးနောက် UrbanMain Initiative။ အချို့သောစီမံကိန်းများက Dutchtown CID ခြေရာခံသို့မဟုတ် UrbanMain ပစ်မှတ်onရိယာကိုအာရုံစိုက်မည်ဖြစ်သော်လည်းရပ်ကွက်အတွင်းရှိနေထိုင်သူများနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်တိုက်တွန်းသည်။
Microsoft Teams မှတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းသို့ဝင်ရောက်ပါ.
6: 00pm-7: 00pm
3207 Meramec စိန့်
စိန့်လူးဝစ် MO 63118
စည်းရုံးရေးမှူး: Dutchtown ကော်မတီများ
နောက်အဖြစ်အပျက် Gravois Park အိမ်နီးချင်းအစည်းအဝေး
အောက်မှာ Filed Dutchtown ကော်မတီများ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CID, Dutchtown ကော်မတီများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဤအဖြစ်အပျက်ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤအဖြစ်အပျက်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ဖော်ပြခဲ့သည် မတ်လ 5th, 2021 .
ဒိန်းမတ် ဖြစ်ရပ်များ Dutchtown ကော်မတီများ Dutchtown စီးပွားရေးတက်ကြွမှုကော်မတီအစည်းအဝေး Dutchtown စီးပွားရေးတက်ကြွမှုကော်မတီအစည်းအဝေး